AFLAANTA | HOYGA WARARKA CAALAMKA
Daawo: Jennifer Lopez oo hal dhunkasho kaliya ku burburisay Nolasha Guurkeeda
Fanaanada Jennifer Lopez oo ka qeybgaleysay barnaamijka abaalmarinada fanaaniinta Latin Ameerika kasoo jeeda ayaa xili ay masraxa saarneyd dhunkasho la wadaagtay seygeedii hore fanaanka Marc Anthony oo ay is fureen sanadkii 2014, Balse dhunkashadan ayaa sababtay in uu burburo gurigigii iyo noloshii guurka cusub ee Marc Anthony maadama uu lahaa xaas kale , balse haatan laga soo saaray aqalka kadib ...
Magacyada Jilayaasha filimka K’naan ee ‘Mogadishu, Minnesota’ oo la shaaciyay.
Filimka musalsalka ah ee la magac baxay Mogadishu, Minnesota , uu soo saaray heesaaga Soomaaliyeed ee K’naan Warsame oo dhawaan la jilayo ayaa jilayaasha filimkaasi dhigaayo la magacaabay. Soomaali iyo ajaanib badan ayaa ka qeyb galaya waxaana dadkii la magacaabay ka mid ahaa majaajiliistaha Soomaaliga ah ee Ingiriiska ee Prince Abdi iyo sidoo kale haweeneyda caanka ah ee model ka ...
Daawo: Fanaan Carbeed oo Guur u soo bandhigay Angelina Jolie
Fanaan u dhashay dalka Lubnaan ayaa guur u soo bandhigay aktarada caanka ah ee Hollywoodka Angelina Jolie taas oo ay kala tageen ninkeedii hore ee Brad Pitt. Angelina Jolie ayaa dalbatay furiin kadib markii ay ogaatay in ninkeeda Brad Pitt uu xiriir jacayl la wadaagay aktarad u dhalatay faransiiska oo flim ay kuwada jileen ingiriiska. Brad Pitt iyo Angelina Jolie ...
Kareena Kapoor oo la Ogaaday in ay uur lee dahay, Hadaba yaa u yeelay
Atriishada Bollywood Kareena Kapoor Khan oo maalmahan ay saxaafadda ka hadleysay uurkeeda ay u leedahay ninkeeda Saif Ali Khan ayaa ugu dambeyn ka dhawaajisay in ay xaqiiqo tahay, waxeyna soo bandhigtay uurka oo u muuqda mid aan qarsoomeyn. iyadoo la weydiiyay sida ay u aragto qaabka hooyanimada iyo rajada cunugeeda, waxeyna ku jawabatay haa waxaan xertaa dhar nafis ii leh ...
Aktarada Caanka ah ee Kajol oo shaacisay sababta ka dambeysay iney Ajay Devgn uu Guursado
Inkastoo Ajay Devgn uu sanadkiii 1999-kii uu ahaa Wiil aad u qurux badan hadana aad u jiliin fiican,hadana waxaa jirta sabab kale oo Kajol ay u dooratay iney guursato Ajay. 1999-kii guurkii ugu weynaa Bollywoodka ayaa dhacay oo waxaa is guursaday Ajay iyo Kajol. Hadaba Kajol ayaa la weydiiyay sababta ugu weyn ee Ajay Devgn ay u guursatay. Waxaa ay ...
Daawo: Fanaanka Mursal Muuse oo Hees Cajiib ah u soo qaaday Xaaskiisii Hore ee Khadra Saliimo
Daawo: Fanaan Caan ah oo iskaga Baxay Fanka,Maxaa ku kalifay
Maxamuud Cali Xaafuun ”Amoore” ayaa ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana uu maanta sheegay inuu isaga baxay gebi ahaanba fanka. Amoore ayaa 13 sano ku ku soo jiray Fanka, waxaana uu ka mid ahaa Fanaaniinta Soomaaliyeed ee aadka loo jecel yahay codka macaan ee ay heesaha ku qaadaan. Maxamuud Cali Xaafuun ”Amoore” ayaa sheegay inuu Fanka uga baxay ...